We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုတဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်သား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုတဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်သား
သူငယ်ချင်း တပ်မတော်သား မင်းကိုလေးစားတယ်။ မင်း၇ဲ့လုပ်၇ပ်ဟာ နောက်ကြောင်းမအေးလှဘူးလေ။ မင်းသတ္တိ၇ှိတယ်လို့ ထုတ်ပြောစ၇ာမလိုဘူး။ သိပ်ကိုကြည်နှူးစ၇ာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။
Thein Sein is not brave enough as you.I appreciate you.
3 March 2012 at 16:19